Sarimihetsika vaovaon'ny gazety - Ny Martsa Manerantany
Gazety eran'izao tontolo izao martsa - Taom-baovao manokana
01 / 01 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ity Bulletin "Taom-baovao Manokana" ity dia mikendry ny hampiseho famintinana ny hetsika rehetra natao tamin'ny pejy tokana. Inona no fomba tsara kokoa hanaovana an'io noho ny fahazoana miditra amin'ireo gazety navoaka rehetra. Haneho ny Bulletins navoaka tamin'ny 2019 izahay, nalahatra hatramin'ny farany ka hatramin'ny voalohany ary nitambatra tamin'ny fizarana 5 isaky ny bala telo. Manompo izahay
31 / 12 / 2019 29 / 12 / 2019 ny Antonio Gancedo
Efa hifarana amin'ny faran'ny taona isika, ao Arzantina ireo mpivarotra. Any, ao amin'ny Punta de Vacas Study and Reflection Park, ao Mendoza, no hikatona ny hetsika amin'ity Taona ity. Nanomboka ity gazety ity izahay tamin'ny hetsika farany tamin'ny taona izay nataon'ireo mpanao diabe tao amin'ny Punta de Vacas Study and Reflection Park, Punta
25 / 12 / 2019 24 / 12 / 2019 ny Antonio Gancedo
Atolontsika eto izao asa izao izay handraisan'ireo Marily an'ny Ekipa Iraisam-pirenena iraisam-pirenena mandritra ny fitohizan'izy ireo ny fitsidihan'izy ireo an'i Amerika sy ny hetsika sasany izay atao any amin'ny firenena maro. Nihaona tamin'ny mpianatra tao amin'ny sekoly José Joquín Salas ny mpikatroka tamin'ny volana martsa faha-2. Natao izany ary
Ny hetsika ataon'ny ekipa Base an'ny World March 2 dia mitohy any amin'ny kaontinanta amerikana. Avy any El Salvador dia nankany Honduras, hatrany Cota Rica. Avy eo dia nankany Panama izy. Ny hetsika sasany tanterahina amin'ny toerana lavitra ny misy ny Team Base dia haseho. Mikasika ny March by Sea, ho hitantsika izany
Ao amin'ity gazety ity dia ho hitantsika fa tonga any Amerika ny ekipa fototry ny 2 World March for Peace and Nonviolence. Tany Mexico, nanohy ny asany izy ireo. Ho hitantsika ihany koa fa ny asa dia atao amin'ny faritra rehetra amin'ny planeta. Ary izany, amin'ny alàlan'ny ranomasina, mitohy ny diabe eo anelanelan'ny fahasahiranana sy fifaliana lehibe. Ho hitantsika ny andro vitsivitsy
16 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Amin'ity Bulletin ity dia hiatrehana ny hetsika izay natao tamin'ny hetsika Mar de Paz Maditer ranomasina, nanomboka hatrany am-piandohan'ny fahatongavan'izy ireo tao Barcelona izay nisy ny fivoriana tao amin'ny Peace Boat of the Hibakushas, ​​ireo Japoney tafavoaka tamin'ny Hiroshima sy ny Bomba Nagasaki, Ilay sambo sambo milamina ao Barcelona. The 27 of
Ao amin'ireo lahatsoratra aseho amin'ity bulletin ity, ny Base Team of the World March dia mitohy any Afrika, mijanona ao Senegal, ny hetsika "Ranomasina Mediteranean'ny fandriam-pahalemana" dia hanomboka, amin'ny faritra hafa amin'ny planeta dia mitohy ny zava-drehetra. Amin'ity gazety ity dia hiresaka momba ny asan'ny Base Team ao
02 / 11 / 2019 ny Antonio Gancedo
Ny sidina manerantany faha-2 dia nanidina avy any amin'ny nosy Canary nankany, taorian'ny nidirany tao Nouakchott, nanohy ny dia namakivaky ny kaontinanta afrikanina. Ity gazety ity dia hamintina ireo hetsika natao tany Maoritania. Ny ekipa ifotony tamin'ny volana martsa dia noraisin'i Fatimetou Mint Abdel Malick, filohan'ny faritra Nouakchott. Taty aoriana, nisy fihaonana tamin'ny
Ny 2 World March dia manohy ny lalany manerana ny kaontinanta afrikanina ary, amin'ny ambiny planeta, mitohy amin'ny hetsika maro ny volana martsa. Ity gazety ity dia mampiseho ny fiovan'ny asa ataontsika. Izy io dia miatrika parlemantera, sisintany, diabe antom-pinoana, hetsika manokana toa ny «Ranomasina Mediterane